Posted by အေးငွိမျး at 12:30 PM0comments Links to this post
တစ်နှစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ အသက်လည်း တစ်နှစ်ကြီးပြန်ပေါ့။
နှစ်တစ်နှစ်ကုန်တိုင်း မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်နေကွယ်၊ သေနယ်သို့တစ်ခါကူး ဆိုသည့် ကဗျာတိုကလေးကို သတိရမိမြဲဖြစ်၏။ သတိရမိသည့်တိုင် သေဘို့အတွက် ဘာများပြင်ပြီးပြီလဲလို့ မေးလာသည်ဆိုအံ့။ ဘာမှ မပြင်ရသေးပါဟု ပြန်ဖြေရမည်ဖြစ်လေသည်။
အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပြီဆိုတော့ အရင်ကထက်စာရင် အခု ငါ ဘယ့်ကလောက်များ တန်ဘိုးတက်လာပြီလဲဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိ။ ဟင်၊ ပြောပလောက်အောင် ဘာကမှလည်း တိုးတက်မလာပါလားကယို။
ဇရာ၏ထုထောင်းမှုကြောင့် ရုပ်ခန္ဓာသည် တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းလာခဲ့ရာ တက်ရိပ်ကိုမမြင်ရ။ ဖြည်းညင်းစွာ ကျဆင်း လာသည်ကိုသာ အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက စာမေးပွဲအတွက်စာကျက်တော့ စာများမှာ ငယ်ငယ်တုံးကလို ကျက်တိုင်းမရ။ ကျက်လိုက်မေ့လိုက်။ အကြောင်းအရာပိုင်းကို မှတ်မိသည့်တိုင် အချက်အလက်၊ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်များကို မှတ်မိဘို့ များစွာခဲယဉ်းသွားလေသည်။ ငယ်ငယ်က ကျက်မှတ်ခဲ့သည်တို့ကို မှတ်မိနေ၍သာ ခုလောက်ဖြေနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ အခုမှ အသစ်စက်စက် စ ကျက်ရမည်ဆိုလျှင် အောင်မှတ်ရဘို့တောင်မလွယ်။
သို့အတွက် အရည်အချင်းပိုင်း တိုးတက်မှုတွင် ယခင်ကထက် အများကြီး ကျသွားသည်။ သို့တိုင် ကျွန်တော်စိတ်မပျက်ပါ။ ဆက်လက် လေ့လာသင်ယူနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ များများလေ့လာလေ၊ ကိုယ်မသိတာတွေ ပိုများလာလေဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရ၏။ ဆိုကရေးတီးပြောသလို ကျွန်ုပ်သိသည်မှာ ကျွဲခြေရာခွက်ထဲက ရေကလေးမျှလောက်သာရှိပြီး ကျွန်ုပ်မသိသေးသော အရာများမှာမူ မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးလောက် များပြားလှပါပေသည်။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျေနပ်သည်မှာ စာအုပ်များရေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်၏။ ပြီးခဲ့သည့် ကာလများ က Safety သင်တန်းများ သင်နေရလေရာ နားရက်ဟူ၍ တရက်မှမရှိ။ တခါတရံ ည ဆယ်နာရီလောက်ကျမှ ပြန်ရသည်။ သင်တန်းမရှိသည့်ညများကျတော့ သားကို မြန်မာစာ သင်ပေးချင်ပြန်ရာ အချိန်အားဆို၍ မရှိသလောက် ရှားလေသည်။ ထို့ပြင် မနှစ်က Train The Trainer သင်တန်းပေးပြန်တော့ ထိုသင်တန်းအတွက် သင်တန်းမှတ်စုများပြင်ရတာ အတော် အချိန်စား သွားသည်။
နောက်ပြီး စင်ကာပူမှာရှိတုံး အခွင့်အရေးရခိုက် လိုချင်သည့်စာအုပ်များကို စာကြည့်တိုက်မှ ငှားကာ scan ကော်ပီကူး။ လက်ထဲကစာအုပ်တွေကိုလည်း သွားလေရာယူသွားနိုင်အောင်၊ ကြိုက်သည့်အချိန် ကြိုက်သည့် စာအုပ်ကို ဖွင့်ဖတ်နိုင်အောင် scan ဆွဲ၍ သိမ်းဆည်းသည်။ ထိုမျှသာမက အချို့စာအုပ်များမှာ ကျွန်တော့်အသက်ထက် ပိုကြီးပြီဖြစ်ရကား စာရွက်သား များမှာ ဆွေးနေပြီဖြစ်၏။ စာအုပ်ကိုကိုင်လျှင် ချစ်သူ့ပါးပြင်ကိုကိုင်သလို အင်မတန် ယုယစွာ ကိုင်တွယ်ရလေသည်။ ထိုစာအုပ်မျိုးများဆိုလျှင် အချိန်မရွေးပျက်စီးသွားနိုင်သမို့ scan ဆွဲထားမှ စိတ်ချရသည်။
စာအုပ်များကို scan ဆွဲရာတွင် စာမျက်နှာ ၄၀၀ ကျော်ပါ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တစ်နာရီကြာသည်။
အချိန်အားကလေးရတိုင်း scan ရနိုင်သလောက်ဆွဲရာ ယခုဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်စာအုပ် ၆၀ ခန့်။ မြန်မာစာအုပ် ၁၀၀ ခန့် scan ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်၏။ သို့တိုင် စာအုပ်များစွာ ကျန်သေးသည်။
ဆိုတော့ scan ဆွဲခြင်းအားဖြင့်လည်း အချိန်များ အတော်စားသည်။ စာအုပ်များကို scan ဆွဲထားခြင်းအားဖြင့် အခြား ဖတ်လိုသူများအား အလွယ်တကူ ဝေမျှနိုင်မည် မဟုတ်ပါလော။ စာအုပ်ပျောက်သွားသည့်တိုင် စိတ်ပူစရာမရှိ။ အချိန်မရွေး print ပြန်ထုတ်လိုက ထုတ်နိုင်မည်။ ပိုပြီးသေချာစေရန် ကျွန်တော်က scan ဆွဲထားသည့်စာအုပ်များကို Thumb Drive၊ External Hard disk, laptop၊ Tablet လေးနေရာခွဲပြီး သိမ်းထားသည်။ (Drop box, mediafire စသဖြင့် online လည်း သိမ်းလို့ရသပေါ့။ လောလောဆယ်တော့ တချို့စာအုပ်တွေကလွဲလို့ အားလုံးမတင်ဖြစ်သေးပါ။)
ယမန်နှစ်က လက်ပ်တော့ ကကျိုးကဂျောင်ဖြစ်၍ သိမ်းထားသည့်စာအုပ် တော်တော်များများပါသွားတာ ရင်နာလို့မဆုံး။
ဆိုတော့ ၂၀၁၆ အတွင်း မည်သည်တို့လုပ်ဖြစ်သနည်း။
မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က MES တွင် PR/RSE/RE များအတွက် Fibreglass Piping Engineering and Design ဟောပြောပွဲ။ မတ်လ ၂၂ နှင့် ၂၃ တွင် AK Safety ၌ Work At Height သင်တန်း။
သြဂုတ်လ ၇၊ ၈၊ ၉ နှင့် အောက်တိုဘာလ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက်များတွင် Knowledge Centre ၌ Train The Trainer သင်တန်း။
နောက်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ကနေ ၂၃ ထိ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲကြီးဖြေရသည်။
နောက်ပြစရာတစ်ခုက သား AEIS စာမေးပွဲအတွက် အသည်းအသန်လုပ်ရတာ။ တော်ပါသေးရဲ့။ ရွေးတဲ့အထဲပါသွားပေလို့။ မဟုတ်ရင် ခုထိ ခေါင်းကိုက်ရတုံးရှိအုံးမှာ။
(အဲလေ အမှတ်တရတွေထဲမှာ ကိုသောင်းတန်၊ ကိုစိုးလင်းတို့နဲ့အတူ သွားဟဲခဲ့တဲ့ “ရင်တွင်းမေ” လည်း ပါသပေါ့။)
လက်ညှိုးထိုးပြစရာဆိုလို့ သည်လောက်ပဲရှိသည်။ ကျန်တာ ဝေလေလေနဲ့ အချိန်ကုန်။ အဲလေ ဝေလေလေလဲတော့ မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။ တောင်စဉ်ရေမရတွေနဲ့ အချိန်ကုန်။
ဒီနှစ်တော့ သင်တန်းတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် ထွက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ တစ်နေ့တစ်နာရီအချိန်ယူပြီး မဖြစ်မနေလုပ်မကွလို့ အသည်းအသန်လုပ်ရင်တော့ မဖြစ်နိုင်စရာမရှိ။ ကြိုးစားကြည့်ဦးမှ။ စင်ကာပူ ခြင်္သေ့မြို့တော်၊ Welding Technology နဲ့ Piping Engineering စာအုပ်တွေရေးဘို့ဟာ ကိုင်ကိုမကိုင်နိုင်အား။
လောလောဆယ်တော့ ဇန္န၀ါရီ လကုန်ပိုင်းမှာပို့ချမဲ့ သင်တန်းနဲ့ ဟောပြောပွဲအတွက် ပြင်နေရလေရဲ့။
မိတ်ဆွေများ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ အားမာန်အသစ်တွေနဲ့ စီးပွားအသစ်၊ သားသမီးရတနာအသစ်၊ အကြံသစ်၊ ဉာဏ်သစ် (ဘာကျန်သေးတုံး) တွေ တိုးပွားကြပါစေဗျား။
၃၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၆။ ည ၁၁း၅၄ နာရီ။
Posted by အေးငွိမျး at 10:52 PM0comments Links to this post
Posted by အေးငွိမျး at 10:49 PM0comments Links to this post
ဆယ်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူး (၅) ဘာသာပါခဲ့ပါသတဲ့။ ကျွန်တော့်တူပါ။
“ကိုင်း၊ လာစမ်းပါအုံးကွ။ ငါ့ကို တစ်နှစ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာလတွေ ရွတ်ပြစမ်း” ဆိုတော့ (၉) လပဲ သေသေချာချာရတယ်။
“ဒါနဲ့ မင်းဟာ မဟုတ်သေးပါဘူး” ဆိုပြီး “ငါ့ကို မြန်မာပြည်မြေပုံဆွဲပြီး ဟောဒီမြို့ကြီးတွေ ထည့်ပြကွာ” လို့ ထည့်ခိုင်းတယ်။
မြန်မာပြည်မြေပုံဆွဲထားလိုက်တာ ဆနွင်းမကင်းကို ကြွက်စားထားသလိုမျိုး။
မြစ်ကြီးနားက ဘယ်နားမှာတုံးဆိုတော့ ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်မဝေးဘူး တဲ့။ သောက်ကယိုးနဲ။
ဒါနဲ့ ကမ္ဘာ့မြေပုံ ထပ်ဆွဲခိုင်းတယ်။ နေရာအထားအသိုတွေတော့ မှန်ပါရဲ့။ ပုံကျပန်းကျ မဆွဲတတ်ဘူး။ နိုင်ငံတွေကို ထောက်ပြခိုင်းတော့ အောင်မယ်၊ သိပ်မဆိုးဘူး။ နိုင်ငံတော်တော်များများကို မှန်အောင်ပြနိုင်တယ်။
အခု စင်ကာပူနိုင်ငံ သမ္မတရဲ့နာမည် သိသလား ဆိုတော့ ဟင့်အင်း။
ဒါဆိုကွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကြီး နာမည်ကို သိသလားဆိုတော့လဲ I don’t know.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်နာမည် ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တဲ့။ (တခြားသူတွေမေးကြည့်လည်း အတော်များများ အဲသလို ဖြေလိမ့်မလား မသိ။)
ဓမ္မစကူးကပေးတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ခိုင်းပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ မေးကြည့်ပြန်သဗျာ။
ကိုင်း ငါ့လူ။ ဘရားအလောင်းရဲ့ ဖြစ်တော်စဉ်လေး ပြောပြစမ်းပါ ဆိုတော့ -
ဟို . . ဘုရင်မကြီးက ဗိုက်ပူပြီး ကလေးမွေးတယ် . . တဲ့
တယ် . . . ငါလေ။
မင်းဟာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ၊ ဗိုက်မပူဘဲ ဘယ်လိုကလေးမွေးမလဲကွ။ ငါ့ပြောစမ်းပါအုံး။ ထားပါတော့ ဆက်ပြော ဆိုတော့ တရားကျင့်လိုက်တာ ဘုရားဖြစ်ကရော တဲ့။ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမကြိုက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ ခပ်တိုတိုပဲ။
အဲဒါနဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို ပရင့်ထုတ်ပေးပြီး ဆယ်ရက် လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်။
မနေ့ညက မြန်မာပြည်မြေပုံဆွဲခိုင်းတော့ အင်း၊ ဆနွင်းမကင်းထက်စာရင် အတော်တိုးတက်လာပြီ။ မြို့တွေထည့်ခိုင်းတော့ စစ်တွေနဲ့ ပဲခူးကို မှန်အောင်မထည့်နိုင်ဘူး။
မန္တလေးကို စာလုံးပေါင်းထားလိုက်တာကလည်း ဘုရားစူးရပါစေ့။
ဒါကဘာရေးထားတာလဲကွလို့ မေးတော့ ကျွန်တော် စာလုံးပေါင်း သိပ်မရဘူး တဲ့။ ဒါဆို မြန်မာလိုပဲရေးပြကွာ ဆိုတော့ မန္ဒလေး တဲ့။ သေဟဲ့နန္ဒိယ။
“ဒါနဲ့မင်း ဂုဏ်ထူး (၅) သာတောင်ထွက် ဆိုကွ” လို့ မေးတော့ ကျွန်တော်က တခြားဘာသာတွေပဲပါတာ၊ မြန်မာစာ မပါဘူး . . ဆိုပါလား။
ကိုယ်လည်း စိတ်တိုလာတာနဲ့ “ဟေ့ကောင် မန္တလေးကိုစာလုံးပေါင်းတတ်ဘို့ မြန်မာစာမှာဂုဏ်ထူးပါရမယ်လို့ မင်းကိုဘယ်သူပြောသလဲ။” အော်ထည့်လိုက်တယ်။
အဲဒါ ဂုဏ်ထူး (၅) ဘာသာပါတဲ့။
ဟေ့ကောင်၊ မင်းအဖေ့နာမည်ဘယ်သူလဲ -
ကျွန်တော်၏ အဖေမှာ ဦးဘ ဖြစ်ပါသည် -
လို့ ဖြေမယ် ထင်ပါရဲ့။
(ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုံးက အဲသလောက်မဆိုးဘူး ထင်ပါရဲ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဦးလေး/ဒေါ်လေး ၅ ထိပ်စီးတို့။)
၉ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၇
Posted by အေးငွိမျး at 10:40 PM0comments Links to this post